जिल्लास्तरिय क्रिकेट प्रतियोगिताको प्रायोजक थपिदै – Rajmarg Online
जिल्लास्तरिय क्रिकेट प्रतियोगिताको प्रायोजक थपिदै
दाङ, फागुन १५ । दाङको घोराहीमा आयोजना हुन थालेको अन्तर्विद्यालय जिल्लास्तरिय क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि प्रायोजक थपिने क्रम जारी छ । शन्ति निकेतन विद्यालयको आयोजना तथा दाङ क्रिकेट संघको प्राविधिक सहयोगमा फागुन २१ गतेदेखि हुन थालेको ‘तपस्या ट्रेड्स जिल्ला स्तरीय विद्यालय टि–२० क्रिकेट प्रतियोगितालाई सफल पार्नका लागि प्रायोजकहरु थपिदै गएको विद्यालयले जनाएको छ ।
विद्यालय स्तरमा क्रिकेटप्रति आकर्षण बढाउँदै क्रिकेटको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ आयोजना गर्न लागेको प्रतियोगिताको सह–प्रायोजन युवा व्यवसायी सनत गिरीले गर्ने टुंगो लागेको प्रतियोगीता संयोजक केशव अधिकारीले जानकारी दिनुभयो । त्यसैगरी प्रतियोगीताको
को–स्पोन्सर घोराही उपमहानगरपालिका वडानम्वर–१५ रहेको पनि अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
प्रतियोगीता संयोजक अधिकारीका अनुसार द् लोटस् टे«निङ सेन्टरले द्वितीय पुरस्कार प्रायोजन र सत्यवती पुस्तक पसलले उत्कृष्ट खेलाडी पुरस्कार प्रायोजन गर्ने टुंगो लागेको छ । बाँकी प्रायोजक पनि केही दिनकै टुंग्याउने भन्दै संयोजक अधिकारीले सहयोगका लागि सबैसँग आग्रह गर्नुभएको छ ।
बलको प्रयोग गरेर प्रतियोगीता सञ्चालन हुने भन्दै दाङ क्रिकेट संघका अध्यक्ष प्रदिप मजगैयाले यसै खेलबाट जिल्लाको जुनियर टिमको छनौट गर्ने जानकारी दिनुभयो । दाङ क्रिकेट संघको प्राविधिक सहयोगमा खेल सञ्चालन हुने भन्दै अध्यक्ष मजगैयाले खेल नकआउटमा खेल खेलाइने जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार प्रतियोगितामा पहिलो हुने विजेता टिमले नगद रु. २५ हजार र दोस्रो हुने टिमले रु. १५ हजार पुरस्कार प्रदान गर्नेछन् । प्रतियोगिताको मुख्य प्रायोजकमा तपस्या ट्रेडर्स रहेको छ ।